Codbixinta Kenya ayaa dhammaatay - BBC News Somali
Codbixinta Kenya ayaa dhammaatay
4 Agoosto 2010
Goobaha codbixinta ayaa xirmay dalka Kenya afti loo qaaday dastuur cusub. Weriyaha BBC ee jooga galbeedka dalka waxaa uu sheegay in codeyntu ay dhammaatay iyadoo aanay wax shil ahi dhicin, taasoo ah markii ugu horreysay dalka.
Image caption Safaf dhaadheer ee codbixinta Kenya
Dastuurka waxaa loogu talo galay in dib loogu habeeyo siyaasadda Kenya, dalkana laga badbaadiyo rabshadihii dhacay kaddib doorashadii guud ee sanadkii 2007dii, markaas oo in ka badan kun qof ay ku dhinteen muran ka dhashay natiijadii doorashada.
Dadka taageersan dastuurka waxay leeyihiin waxaa uu xaddidayaa awoodda madaxweynaha, waxaa uu xakameynayaa isla weynida, waxaana uu xallinayaa arrinta muranku ka taagan yahay ee dib u habeynta dhulka. dadka ka soo horjeeda dastuurkan waxay sheegayaan inuu arrimaha sii xumeyn dono oo keliya.